आखिर के छ ‘मोदी’ नाम गरेको भेडामा ? यसको मूल्य नै एक करोड पाँच लाख – Khabaarpati
आखिर के छ ‘मोदी’ नाम गरेको भेडामा ? यसको मूल्य नै एक करोड पाँच लाख
December 15, 2020 December 15, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on आखिर के छ ‘मोदी’ नाम गरेको भेडामा ? यसको मूल्य नै एक करोड पाँच लाख
अनौठो रुप र गुणस्तरीय मासुका लागि प्रसिद्ध ‘मेडगयाल’ जातको एउटा भेडोको ७० लाखमा बेच्न गरिएको प्रस्ताव मालिकले अस्वीकार गरेका छन्।
भारतको महाराष्ट्रको सांगली जिल्लाका भेडा पालक बाबु मेटकरीले ७० लाख रुपैयाँमा बेच्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन्। उनले भेडाको मूल्य एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ राखेका छन्।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
अन्य जातका भेडाभन्दा यो ठूलो आकारको हुन्छ। प्रजननका लागि यो जातको भेडाको माग धेरै छ। एक अधिकारीका अनुसार राज्यको पशुपालन विभागले भेडाको यो नस्लको नाम तहसिलको मेडगयाल गाउँको नामका आधारमा राखेको हो।
भेडापालक मेटकरीसँग २०० वटा भेडा छन्। एउटा मेलामा भेडालाई ७० लाख रुपैयाँमा किन्ने प्रस्ताव मेटकरीले अस्वीकार गरेका हुन्। मेटकरीका अनुसार त्यो भेडाको नाम सरजा हो। तर मानिसहरुले त्यो भेडाको तुलना भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग गर्छन्।
उसको नाम मोदी राखिएको छ। जसरी मोदीले चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बने, त्यसरी नै सरजाले जुनसुकै मेला र बजारमा धेरै मानिसको ध्यान खिचेकाले उसको नाम मोदी राखिएको उनको भनाइ छ। मेटकरीले सरजा परिवारका लागि शुभ रहेकाले बेच्न नचाहेको बताए।
महाराष्ट्रको भेडा एंव बाख्रा विकास निगमका सहायक निर्देशक डा. सचिन टेकाडेले सन् २००३ को एक सर्वेक्षणअनुसार सांगली जिल्लामा शुद्ध ‘मेडगयाल’ नस्लका पाँच हजार ३१९ भेडा थिए। तर निगमको प्रसारपछि अहिले सांगली जिल्लामा भेडाको संख्या १५० लाख भन्दा धेरै छ। जसमा मेडगयाल नस्लका भेडा धेरै छन्।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
ससुराले आफ्नै बुहारीलाई १२ वर्ष सम्म बच्चा जन्माउन रोक लगाउनुको कारण थाहा पाउँदा दुनियाँ चकित
इजरायलका लागि खुल्यो अबसर, यस्ता मापदण्ड भएका अब सरकारी स्तरवाटै इजरायल जान पाउने
कुकुरसंगै सुतेका यि १० वर्षका बालकको तस्बिरले रुवायो संसार
January 25, 2021 January 25, 2021 goodmam
कपालका कारण रातारात चर्चामा आइन् यि सुन्दरी बालिका, जसका बढे एकैसाथ कैयन फ्यान, तस्विर बने भाइरल
January 14, 2021 goodmam
फिटकिरीको प्रयोगले यसरी बनाउनुहोस् अनुहारलाई सुन्दर र कालोपोतो विहिन
काठमाडौं आउँदै गरेको ग्याँस ट्यांकर थानकोटमा दु’र्घटना, सयौं सवारीसाधन… October 19, 2021
ग्याँस सिलिण्डर बोकेर काठमाडौं आउँदै गरेको ट्रक थानकोटमा यसरि पल्टिएको थियो October 19, 2021
सेती नदीमा आएको बाढी पुलमाथि पुग्न थल्यो, पुल नै बग्ने खतरामा October 19, 2021
लगातारको वर्षाका कारण उर्लियो महाकाली, तटीय क्षेत्रका बस्ती डुबानमा October 19, 2021
गर्लफ्रेण्डले भनेपछि सेतो दारी कालो बनाउँदा भयो नसोचेको आपत….. October 19, 2021